तिथि मेरो पत्रु » 10 बिल्ली गर्लफ्रेंड्स श्रेष्ठ हुनुहुन्छ किन कारणहरू
तपाईं एक प्यारे विचार छौं जब तपाईं जीवनमा चरण हो रही छ, साथी purring तपाईं कम्पनी राख्न? लज्जित छैन; गले. बिल्ली शानदार हो, र म धेरै मामलाहरुमा भन्न त टाढा जानु हुनेछ, तिनीहरूले प्रेमी भन्दा पनि राम्रो हुन्छ. पक्का, तिनीहरूले भौतिक सामान पूरा गर्न सक्षम हुनुहुन्न (कि हामी तिथि मेरो पत्रु के अर्थ निश्चित छैन), तर के इंटरनेट छ, आधुनिक प्रविधि र क्रेडिट कार्ड लागि हो. तिनीहरूले के गर्न सक्छन् तपाईं प्रेम प्रदान छ, कम्पनी र हंसते को एक पूरी धेरै. मानिसहरू चाहनुहुन्छ सबै आसपास 'पागल बिल्ली महिला' कलंक हिर्काउन सक्छ, तर hilariously सामान्यकृत कारण प्रशस्त एक प्रेमी मा एक बिल्ली चयन गर्न छन्.
1. तिनीहरूले शायद नै मर्कूस मिस
तपाईं म यहाँ शौचालयको कुरा गर्दै छु भनेर थाह, महिलाहरु. यो लक्ष्य सन्दर्भमा बिल्ली सामान्यतया अविश्वसनीय सटीक.
2. तिनीहरूले आफैलाई खैर Groomed राख्नुहोस्
द्वारा फोटो लूका जोन्स सीसी
बिल्ली वास्तव मा आफ्नो उपस्थिति ख्याल र राम्रो देख आफूलाई राख्न. पक्का, लामो कपाल वाला कुखुराहरू थप केही आवश्यकता brushing, तर कम से कम तिनीहरूले रमाइलो.
3. उनि कम मर्मत छौं
सबै बिरालोहरु निद्रामा छ चाहनुहुन्छ, खाना, pats र विश्राम. तपाईं खराब मूड संग सम्झौता छैन हुनेछ, भावनात्मक बेवास्ता वा tuning मा TurtleMan, धुनमा राजवंश या जो अन्य बकवास मान्छे हेरिरहेका रमाइलो मानिरहेको जस्तो देखिन्छ.
4. तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ जब तिनीहरूले सान्त्वना
यो रोग गर्न आउँदा बिल्ली एक छैटौं अर्थमा छ, र अक्सर विशेष सान्त्वना र आफ्नो मालिक बिरामी हुँदा मायालु हो. तिनीहरूले मानिसको फ्लू करार छैन र बिरालोहरु उच्च विकल्प हो किन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ त एक मानिस तपाईं को स्पष्ट स्टीयरिंग यो Juxtapose.
5. तिनीहरू न्यानो तपाईं राख्नुहोस्
द्वारा फोटो Alisha वर्गेस सीसी
तपाईंको बिल्ली न्याय वा कारण तपाईं औंलाहरू कल भयंकर icicles गर्न तिमी देखि दूर पुल छैन. तिनीहरू माथि सहारा लेना र तपाईं र न्यानो आफ्नो हिमनदी खुट्टा राख्न खुसी छौं.
6. कुनै पतिको
कुनै पागल सासू मेरो पुस्तकमा एक विशाल प्लस छ.
7. Pats र केवल Pats
द्वारा फोटो Emilian रबर्ट Vicol सीसी
तिनीहरू एक मालिश देखि केहि बढी आशा छैन. तपाईं म के मतलब थाहा, सज्जनहरु.
8. तिनीहरूले तपाईंको भोजन को बानीहरु न्याय नगर्नुहोस्
बदामको घिउ बाहिर एक 1am खाजा बनाउने, चकलेट चिप्स र एक चम्चा? एक बिल्ली तल भनेर संग हुनेछ. होइन आलोचक लग वा यहाँ जिम सदस्यता बारे unsubtle संकेत.
9. यो सिंक मा कुनै दाह्री जुँगा
द्वारा फोटो केन छापा सीसी
हाँ, कि यमक भयो. तपाईं स्वागत छौं.
10. तपाईं तिनीहरूको मेडिकल रेकर्ड पहुँच
त्यो खौफनाक सुनिन्छ, र म बिलकुलै आरामदायी छु. तर तपाईं यो आफ्नो feline पोस्तीन मित्र संग कुनै आश्चर्य VD विषयहरूमा छन् थाह पाउनु सान्त्वनादायी छ कि स्वीकार गर्न.